Dakhliga internetka ee aan khatarta iyo maalgashiga LIFE PICKER - 2018
Dakhliga Internetka oo aan lahayn halis iyo maalgashi
Dakhliga dheeraadka ah ee kombuyuutarka guriga
Daraasad lagu sameeyay kuwa dhagaystayaasha ah ee malaayiin ah oo isticmaalaya internetka ayaa si joogto ah u muujinaya in ugu yaraan 9 ka soo jawaabeyaasha 10 aysan ku qanacsanayn dakhligooda hadda shaqadooda. Mashruuca shabakada dumarka ee ku saabsan lacagta ayaa u sheegi doonta qaybtaas isticmaala sida aad si dhab ah uga dhigi karto lacag internetka. Qeybtan oo ah muwaadiniinta aadka u xiisaha badan oo raadinaya waxay inta badan ku jiraan dhalinyarada labada jinsi, kuwaas oo ku jira da'da ugu firfircoon ee 25-40. Qaadashada waqti aad u wakhti badan oo internetka ah, ugu yaraan saacadaha 3-4, waxay raadinayaan inay ogaadaan meesha iyo sida lacag loogu sameeyo internetka.
Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan mawduucan, ma aha in qofku ku qanacsan yahay jawaabaha su'aalahooda. Qofna ma jecla talooyinka la soo jeediyey si lacag loogu sameeyo shabakada sababtoo ah la'aanta aqoon iyo khibrad gaar ah. Tusaale ahaan, qof walbaa ma awoodo inuu u shaqeeyo nuqul qoruhu ku beddelayo qoraalka. Badeecada alaabta loo adeegsado internetka waxay u baahan tahay waqti badan, oo ku dhawaad ​​cidina ma rabto in ay ka tagto shaqadooda ugu weyn sababtoo ah "crane in heaven". Sababo kala duwan, dad badan ma rabaan inay ka qayb qaataan nidaamyada suuq-geynta heerarka kala duwan. Ganacsiga suuqa Forex iyo cryptocurrency waxay u egyihiin siyaabo khatar ah oo ka mid ah helitaanka, iyo marka laga reebo waxay u baahan yihiin raasumaalka abuurka iyo aqoonta dhaqaalaha.
Dhibaatooyinkaas oo dhan waxay ku adkeeyeen dadka inay raadiyaan shaqo, kuwaas oo doonaya in ay helaan dheeraad ah, inkastoo ay yar yihiin, laakiin dakhliga xasilloon ee shabakadda, iyada oo aan la bilaabin maalgelin, xirfado gaar ah iyo aqoon.
Dakhliga ku yaal meeshiiska boosta
Iyadoo la diiwaangelinayo dhowr goobood oo isku mid ah, dadka isticmaala kuwa jecel waxa loogu yeero "shimbir gacanta ku jirta" ama aan wax ku deeqin waxay awood u yeelan doontaa inay si gaar ah u kasbadaan wakhti ku habboon naftooda, inkastoo yar yar, laakin la hubo 100% lacag. Waxaad samayn kartaa tan maalinta ugu horeysa iyo daqiiqda ugu horeysa ka dib diiwaangelintaada.
Dadka leh sabir iyo rabitaan waxay awoodi doonaan inay si sahlan u kasban karaan 2-3 bishiiba bishiiba bil kasta mashruucyada, ma ahan mid aad u sarreeya wakhtigeena. Waxaa jira afar siyaabood oo waaweyn oo lacag loogu sameeyo:
helitaanka iyo barashada waraaqaha macluumaadka ganacsiga kala duwan;
sameynta hawlo sahlan;
Marka laga soo tago fursadaha kor ku xusan si aad u kasbato bogag intaa ka badan oo la bixiyo si ay u helaan dakhli kasta oo ka mid ah isticmaalkooda, soo jiidasho cusub u dirista adeegga. Badanaa kuwani waa asxaabta, macaamiishooda, iyo akhristayaasha bogga bogga ee shabakadaha bulshada. Xaaladdan oo kale, qayb ka mid ah dakhliga ay heleen gudbinta waxaa loo wareejinayaa jeebka kuwa kuwa ku casuumay inay iska diiwaan geliyaan goobta xubin ka mid ah bulshada. Haddii kooxda kooxda martigelisay ay ku qoranyihiin tirada daraasiin dad ah, ka dibna dakhliga ugu hooseeya ee bishiiba 2 000 waa loo dhufan karaa ugu yaraan 6-7.
Gabar dhigta iskuulka oo ka timid magaalada Moscow ayaa ogaatay wax ku saabsan uurka kaliya waqtiga dhalmada
APL rookie waxaa ku dhacay guuldaradii labaad oo xiriir ah tartankii bilowga
Waxay ka hortagtay qaab aan caadi aheyn oo lagula diriro kuleylka
Badeecad caan ah ayaa isu rogtay inay halis ku tahay caafimaadka
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka waxay uga digaysaa Congress-ka ku saabsan saameynta ku soo kordhaysa ee Ruushka ku leeyahay qaaradda Afrika
Crimean Tatars wuxuu ka hadlay guulaha la gaadhay shan sano ka dib markay dib ula midoobeen Ruushka
Ciidamada amaanka ee Yukreeniyaan ayaa toogtay SUV isku dayay inay jabiyaan xadka